> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee a Ɛpo Day Kaadị na Home
Naa, ọtụtụ ọrụ ịtụ Ɛpo Day kaadị online dị ka onyinye. Ee, ọ bụ adaba na mfe ime otú ahụ. Ma kaadị na ụdị na-ekwekọghị na-ejedebeghị na nnyefe oge dịgasị iche site ụbọchị izu. N'ezie, ị na nwere ike chepụta printable Ɛpo Ụbọchị kaadị n'ụlọ na ala.
Wondershare Photo Collage Studio-Enye gị ohere ime ka a Ɛpo Day kaadị n'ụlọ na ruo 300 kaadị ndebiri. Gịnị bụ ihe dị mkpa bụ na ọ dịghị nnyefe oge. Ịnwere ike ibipute ya ozugbo na gị ejikọrọ na ngwa nbipute ma ọ bụ chekwaa dị ka oyiyi ma na-ezipụ site email. Chọrọ a ikpeazụ nkeji Ɛpo Day onyinye? Ọ bụ a arụrụ n'ụlọ ekele kaadị. Nke a bụkwa ezi ohere maka ụmụaka na-eme ka ha onwe ha kaadị maka Ɛpo Day n'ihi iCollage for Mac nwere a mara mma na nwa ewu-enyi na enyi interface.
1 Họrọ a Ɛpo Day Kaadị Template
Mgbe ị na-amalite a foto ọhụrụ collage, ma ọ bụ pịa Plus button n'okpuru Ngwá Ọrụ mmanya, na windo n'okpuru ga gbapụta. Ebe ọ bụ na anyị na-eme a Ɛpo Day kaadị, gaa na Ɛpo Day Atiya ma họrọ ọkacha mmasị gị kaadị template. Ọ bụrụ na a ala akụ na-egosipụta na a template, i kwesịrị njikọ Ịntanetị na-template mbụ. Nke a foto kaadị Ndinam software dere n'elu 300+ free collage ndebiri na ihe na-abịa oge niile.
Arụrụ n'ụlọ Ɛpo Day Kaadị Atụmatụ:
1. Pịa ekpe ala njikọ 'Download All Templates' iji na-niile fabulous ndebiri maka free. 2. Ị nwekwara ike chepụta a Ɛpo Day site ọkọ na iji wuru na-ego.
2 Import photos n'ime Ɛpo Day kaadị
Na Add Photo taabụ, ikpuru & dobe foto n'ebe a na-njide ihe nke template ma ọ bụ abụọ click na etiti na-agagharị na foto gị. Usoro ihe omume na-akwado .jpg, .bmp, .png, .emf, .wmf, na .tiff foto formats.
Home Photo-edezi Atụmatụ:
1. Ọ bụrụ na foto gị bụ oke buru ibu aka zuru ugbu a na eku, pịa abụọ button na foto edit ngwá ọrụ ka ibubaa si foto na eku.
2. Ime akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ cross na foto, i nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nke foto na eku.
3 Kpọmkwem ibipụta ma ọ bụ chekwaa dị ka oyiyi
Ị mkpa a ngwa nbipute bipụta gị Ɛpo Day kaadị. Bụrụ na ọ bụghị, na-aga Zọpụta collage taabụ mbupụ image mere na ị nwere ike izipu site email. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike ịkọrọ ya bụ ezie na mobile ngwaọrụ, webpage, blọọgụ, wdg
Lee, m na ikwu na ị na-esi Photo Collage Studio maka gị na ụmụaka na-eme ka Ɛpo Day onyinye ya / ụmụ klas ya. Ma ọ na-ịrịọ okenye ọrụ iji nweta a arụrụ n'ụlọ Ɛpo Day kaadị dị ka ikpeazụ nkeji Ɛpo Day onyinye.